Pamusoro Gumi Hwakabhenefiti Hwakanaka hweGlutathione Kuwedzerwa Kweyako - Wisepowder
Glutathione inobatsira zvipenyu nenzira dzakawanda nekuita se antioxidant. Iyo amino acid mukomboni uripo mumasero ese emunhu. Chero hupenyu hwehupenyu hune glutathione mumuviri wayo. Iyo ine antioxidant ine simba iyo iyo kana iripo mumatanho akakwana inogona kutidzivirira kubva kuhutano hunokuvadza mamiriro sehosha yeAlzheimer, chirwere chemwoyo, uye kunyange sitiroko.
Kunyangwe iyi antioxidant inogadzirwa mumasero emuviri yedu glutathione inogona kuiswa mumuviri wedu, kuisirwa zviripamusoro, kana seanodhaka.
Glutathione isanganiswa yakaumbwa nekubatanidzwa kwematatu maamino acids: cysteine, glutamic acid, uye glycine, isimba rakasimba antioxidant inodzivirira uye kunonoka kukwegura kwemasero. Glutathione anodzivirira kukuvara kwemasero uye anobvisa makemikari anokuvadza muchiropa uye anokwanisa kuzvisunga nemishonga inobatsira muviri kuti iakure nyore. Inoita zvakare basa rakakosha rekuwedzera kusasimba kwemuviri uye kutonga kukura uye kufa kwemasero mumuviri wedu. Nhamba dze glutathione dzakaonekwa kuti dzideredze nekukwegura.
1. Inoshungurudza oxidative kusagadzikana
Kana kugadzirwa kwemahara radicals mumuviri kuchikwira, uye muviri usingakwanise kumirisana, zvinoguma nekushungurudzika kwe oxidative. Nhamba dzakadzika dze oxidative kusagadzikana dzinosiya muviri uchitapurika nemamiriro ezvekurapa shuwa, rheumatoid arthritis, uye kenza. Glutathione inobatsira kuderedza oxidative kusagadzikana iyo inobatsira muviri kune wadhi dzekurwara idzi.
Nzvimbo dzakakwirira dze glutathione mumuviri dzinozivikanwawo kuwedzera huwandu hwe antioxidants. Uku kuwedzera kwean antioxidants pamwe ne glutathione kunoderedza oxidative kusagadzikana.
2. Ngavandudze hutano hwemwoyo
Glutathione, nekugona kwayo kudzivirira oxidization yemafuta mumuviri wemunhu, inogona kubatsira kudzikisa zviitiko zvekurwiswa kwemoyo uye zvimwe zvirwere zvemoyo. Zvirwere zvemoyo zvinokonzerwa nekuunganidzwa kwe arterial plaque pamukati memasango arterial.
Low-density lipoproteins (LDL), kana yakaipa cholesterol, inokonzera danda nekukuvadza mukati memukati memitsipa. Aya mapepa anotsemuka uye anogona kuvhara mitsipa yeropa, kumisa kuyerera kweropa uye kukonzera kurwiswa kwemoyo kana kurohwa.
Glutathione, pamwe ne enzyme inonzi glutathione peroxidase, inoisa superoxides, hydrogen peroxide, mahara radicals uye lipid peroxides inokonzera lipid oxidation (mafuta oxidation). Izvi zvinodzivirira iyo cholesterol yakaipa kubva mukukuvadza mitsipa yeropa uye nekudaro kuumbwa kwedanda. Glutathione nokudaro inobatsira kudzikisa njodzi yekurohwa kwemoyo uye zvimwe zvirwere zvemoyo.
3. Inodzivirira maseru echiropa mune doro uye mafuta echiropa chirwere
Kana paine kushomeka kwema antioxidants uye glutathione, mamwe maseru eropa anowanzo kufa. Izvi zvinoderedza kugona kwechiropa kurwisa mafuta chiropa uye doro reropa rechiropa. Glutathione, kana iripo mumatanho akakwana inowanzo kuwedzera huwandu hweprotein, bilirubin, uye ma enzymes muropa. Izvi zvinobatsira vanhu kupora kubva kune mafuta uye chidhakwa chiropa chirwere nekukurumidza.
Yakakwira glutathione muyero kurapwa nemukati kune vanhu vane chirwere chechiropa chakakora kwakaratidza kuti glutathione ndiyo yakanyanya kurapa chirwere ichi. Izvo zvakaratidzawo kudzikiswa kwakanyanya mumalondialdehyde, mucherechedzo wekukuvara kwesero muchiropa.
Orally yakapihwa glutathione yakaratidzawo kuti antioxidant yaive nemhedzisiro mune vanhu vanotambura neisina-chinwiwa mafuta echiropa chirwere chechiropa.
4. Inobatsira kurwisa inflation
Inflation ndechimwe chezvikonzero zvikuru zvezvirwere zvikuru senge chirwere chemwoyo, chirwere cheshuga, uye kenza.
Kukuvara kunoita kuti mitsipa yeropa iri munzvimbo yakakuvara iwedzere kubvumira rimwe ropa kuyerera kunzvimbo iyi. Ropa iri rakazara nemaseru emuviri anochengetedza nzvimbo kuti abvise chero mukana weutachiona. Kana imwe nzvimbo yakakuvara ichiporesa, kuzvimba kunodzikira uye maseru emuviri anodzikira pakuwanda. Asi mumuviri usina hutano hwakakanganiswa nekushushikana, hupfu, husina hutano inflation haizoderedze izvo nekukurumidza.
Glutathione inobatsira mune zvakadai seizvi nekuwedzera maseru machena masoja. Ivo vanodzora huwandu hwemasero machena anoenda kunzvimbo yakakuvara zvichienderana nekuomarara kwemafashama.
5. Inovandudza insulin kuramba
Sezvo isu tinenge tichikura mazero e glutathione mumiviri yedu anova akaderera sezvo muviri wedu uchigadzira zvishoma uye zvishoma glutathione. Izvi zvinoguma nezvishoma kupisa kwemafuta mumuviri wedu. Naizvozvo muviri unochengeta mamwe mafuta. Izvi zvinowedzerawo kushungurudzika kune insulin.
Kudya kunowedzera mwero wecysteine ​​uye glycine kuchawedzerawo kugadzirwa glutathione mumuviri wedu. Uku kwepamusoro kuvepo kwe glutathione kunobatsira mukukura insulin kuramba uye yakakwirira mafuta kupisa.
6. Peripheral vascular chirwere varwere vanoona yakagadziriswa kufamba
Chirwere chechipfuva cheartery chinotambudza vanhu vane misero yavo yakavharwa nepepa. Chirwere chinonyanya kubata makumbo emunhu. Izvi zvinoitika kana yakavharika mitsipa yeropa isingakwanise kupa huwandu hweropa rinodiwa kune mhasuru painoda. Iye wega anotambura nechirwere chepasirosi yemagetsi anonzwa kurwadziwa uye kupera simba kana achifamba.
Glutathione, akaperekedzwa nemukati kaviri pazuva, airatidza kuvandudzwa mumamiriro avo ezvinhu. Ivo pachavo vakakwanisa kufamba kwehurefu hwakareba uye havana kunyunyuta nezve chero kurwadziwa.
7. Glutathione yeganda
Glutathione mabhenefiti anotambanudza zvakare pakuchengetedza hutano ganda uye kuribata. Acne, kuoma kweganda, eczema, makwinya, uye maziso ane puffy anogona kurapwa neakakodzera glutathione dosage.
Iko kushandiswa kwe glutathione kweganda kunodzivirira tyrosinase, enzyme inogadzira melanin. Iko kushandiswa kwe glutathione kwenguva refu kuchaguma paganda rakareruka nekuda kwekugadzirwa kweshoma melanin. Iyo yakaratidzirwawo kuderedza psoriasis, kugadzirisa ganda elasticity, uye kuderedza makwinya.
8. Inoderedza zviratidzo zvehosha yaPasinson
Tremors ndechimwe chiratidzo icho vanhu vanotambura kubva Chirwere chePalinson Kazhinji vanotambura ne. Izvi zvinodaro nekuti hosha yacho inotambudza sisitimu yepakati. Inravenous manejimendi ye glutathione yakaratidza kuvandudzwa kwevanhu kubva muchirwere. Mushonga wacho wakaderedza kudedera uye kuomarara kune varwere vari pasi pekucherechedzwa. Zvinotendwa kuti glutathione inogona kuita kuti hupenyu huve nyore kune avo vanorwara nechirwere chePasinson nekuderedza zviratidzo zvinoratidzwa neanorwara.
9. Inobatsira vana vane autistic nekuderedza oxidative kukuvara
Vana vane autism vanoratidzwa kuve nehupamhi hwepamusoro we oxidative kukuvara muhuropi hwavo. Panguva imwecheteyo, iwo mazinga e glutathione akanyanya kuderera. Izvi zvakawedzera mukana wekuti vana vaenderere mberi nekukuvara kwemutsipa nemakemikari senge mercury.
Vana vanobatwa nemuromo uye wehomwe glutathione dosage yakaratidza kuvandudzwa kwemazinga eplasma sulfate, cysteine, uye neropa glutathione mazinga. Izvi zvinopa tariro kuti glutathione kurapwa kunogona kuvandudza uropi kushanda uye saka, hupenyu hwevana vane autism.
10. Inogona kubatsira kurwisa autoimmune chirwere
Zvirwere zvekuzvimiririra zvinosanganisira chirwere chechiliac, arthritis, uye lupus. Zvirwere izvi zvinokonzeresa kuzvimba kusingaperi uye kurwadziwa kunowedzera oxidative kusagadzikana Glutathione inogona kudzora muviri wemuviri kupindura nekumukurudzira kana kuideredza. Izvi zvinopa vanachiremba kuti vadzikise kushungurudzika kweiyo oxidative mune vanhu vanotambura neapo autoimmune kusagadzikana.
Zvirwere zve Autoimmune zvinoparadza cell mitochondria mune mamwe masero. Glutathione anobatsira kuchengetedza cell mitochondria nekurwira mahara radicals. Glutathione inokurudzira masero machena uye maT cell anorwisa hutachiona. T masero akakurudzirwa ne glutathione airatidza kugona kuwedzera kurwisa hutachiona uye hutachiona.
Sezvo muviri unenge uchikura, huwandu hwe glutathione mumuviri hunoderera. Isu tinofanirwa kudya chikafu chinozobatsira muviri kudzosera huwandu hwe glutathione. Kune zvakawanda zvekudya izvo zvinoita zvine glutathione zvakasikwa kana glutathione inowedzera hutano.
Kutoenda sekudya kwe glutathione, Whey protein ine gamma-glutamylcysteine. Iko kusanganisa kwe glutathione uye cysteine ​​iyo inoita kuti zvive nyore kune muviri wedu kupatsanura maviri maamino acids. Ivo vaviri zvakanaka antioxidants.
· Allium zvekudya
Kunaka glutathione zvinowedzera chikafu kubva kune izvo zvinomera izvo zviri zveAllium genus zvine hupfumi muSurfur. Sulfur inobatsira muviri wedu kugadzira zvimwe zvakasikwa glutathione. Anyezi, gariki, scallion, chives, shallots, uye leeks ndizvo zvekudya izvo zviri zveiyo allium genus.
· Cruciferous miriwo
Cruciferous miriwo ine glucosinolates iyo inowedzera iwo glutathione mazinga mumuviri wako. Ndokusaka zvidyarwa zvinotakura miriwo iyi zvine saridhi inonhuhwirira.
Kabichi, cauliflower, broccoli, kale, bok choy, brussels anotumbuka, arugula, radara, watercress, uye collard greens zvese zvinogadzirwa miriwo.
· Zvikafu zvine alpha-lipoic acid
Nzombe, nhengo yenyama, sipinashi, mbiriso yemubiki, uye matomatisi zvakanaka zvinowedzera zvegutathione sezvo vakapfuma Arifa-lipoic asidhi. Iyi asidhi inovandudza uye inowedzera mwero we glutathione mumuviri wako.
· Selenium akapfuma chikafu
Seye yekutsvaga mineral selenium inobatsira muviri mukuwedzera mazinga e glutathione uye mamwe maoxoxidants mumuviri. Zvikafu zvine selenium iz oysters, hove dzegungwa, mazai, brazil nuts ,asparagus, howa, uye yakazara zviyo.
Glutathione zvinowedzera huya mumhando dzakasiyana siyana. Vanogona kutorwa nemuromo. Asi nemuromo anotorwa glutathione haasi iwo anobatsira mukuzadza mizinga yemuumbi.
Nzira iri nani yekutora glutathione yekuwedzera ndeye kutora liposomal glutathione pane isina chinhu mudumbu. Chinhu chemushonga we glutathione unowanikwa mukati me liposomes. Kutora ichi chekuwedzera nemuromo inzira iri nani yekuwedzera iyo glutathione yemuviri.
Glutathione inogonawo kuverengedzwa neakaneta nebulizer. Asi iwe uchazoda mushonga wekuishandisa.
Transdermals uye lotions zviripo izvo zvinogona kuiswa pamusoro. Chikamu chavo chekupinza chinoshanduka uye dzimwe nguva chingave chisina kuvimbika.
Intravenous management ndiyo nzira yakatwasuka yekutora glutathione zvinowedzera. Iyo ndiyo zvakare nzira inokanganisa.
Glutathione supplementation ine mhedzisiro isingawanzo. Izvi zvinogona kubva pakutumbuka. abdominal cramps, gasi. zvinyoro zvakasununguka, uye zvinogoneka zvinogadzirisa maitiro. Zviri nani kubvunza chiremba wako usati watora glutathione supplements.
Iyo glutathione muyero unodikanwa kumunhu unogona kusiana pane zera remunhu, huremu, uye muviri. Zvinogona zvakare kuvimba nehutano hwake uye nhoroondo yekurapa. Zvirinani kubvunza chiremba wako kuti atarise kuti ndeyero ipi yekuwedzera yaunofanira kutora.
Glutathione ndiyo molekyumu yakakosha mumiviri yedu. Iyo yakasimba antioxidant uye inobatsira muviri kuchengetedza cheki pane yemahara radicals. Izvi zvinotichengeta takagwinya uye wadhi dzezvirwere sedambudziko remwoyo, cancer, uye kurohwa kwemoyo.
Izvo zvakakosha kuti uchengetedze yakakwana yehuwandu hwe glutathione mumiviri yedu. Pane nzira dzakasiyana siyana dzatinogona kuzviita nadzo. Tinogona kudya glutathione yakapfuma chikafu, tora glutathione pamuromo, ishandise zvakanyanya inowanikwa mukutarisirwa mukati.
Tsvaga zano rekurapa pese paunofunga kutora glutathione zvinowedzera kushandura danho raro mumuviri wako.
Rouhier N, Lemaire SD, Jacquot JP (2008). "Basa re glutathione muzvinhu zvephotosynthetic: mabasa ari kubuda e glutaredoxins uye glutathionylation". Ongororo Yegore Negore yePlant Biology. 59 (1): 143-66.
Franco, R .; Schoneveld, OJ; Pappa, A.; Panayiotidis, MI (2007). "Iro repakati basa re glutathione mune pathophysiology yezvirwere zvevanhu". Zvinyorwa zvePhysiology uye Biochemistry. 113 (4-5): 234-258.
2. Kubatsirwa kweGlutathione